सारा र सलोनको जोडी बाँधिएकै हो त ? - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
निर्देशक सुब्रत आचार्यको आगामी सिनेमाका लागि अभिनेता सलोन बस्नेत र अभिनेत्री सारा श्रीपाईली फाईनल भएको संकेत मिलेको छ । सुब्रतको फेसबुक स्ट्याटसलाई सत्य मान्ने हो भने उनको निर्देशनमा बन्न लागेको सिनेमा ‘सुश्री सम्पत्ति’का लागि सलोन बस्नेत र सारा फाईनल भएका छन् ।
उनले सारा र सलोनसँगको एक तस्बिर सेयर गर्दै क्याप्सनमा ‘सुश्री सम्पत्ति’का च्याम्पटीहरु लेखेका छन् । लामो समय देखि सिनेमाका लागि कलाकार खोजीरहेका सुब्रतले यसरी सिनेमाको नाम जोडेर कलाकारहरुसँगको तस्बिर सेयर गर्दा उनीहरु सिनेमाको लागि फाईनल भएको धेरैको बुझाई छ ।
यतिबेला सलोन र सारा सुब्रतको सिनेमाका लागि फाईनल भएको मात्रै हैन उनीहरु जोडीको रुपमा देखिन लागेका हुन् त ? भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उब्जेको छ । सारा यतिबेला सिनेमा ‘पिंजडा ब्याक अगेन’को प्रचार प्रसारमा छिन् । उता सलोन भने अन्य केही सिनेमाको छायाकंनको तयारीमा छन् ।